Browsing: » Home »ကျန်းမာရေး»ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး	Leaveacomment
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး	Posted by danyawadi on April 20, 2016 in ကျန်းမာရေး	ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး
ဈေးသက်သာတယ်။ ဗိုက်ဝစေတယ်။ အမျိုးမျိုးပြု လုပ် စားသုံးလို့ရတယ်။ ပရိုတင်းဓါတ် ဖြည့်စီးပေးတယ်။ ပဲတွေမှာ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါပြီး ချေဖျက်ရာမှာ အချိန်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြာရှည်စွာ ဗိုက်ဝစေပြီး ခဏခဏဗိုက်ဆာခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၂. ဟင်းရည်
မပါမဖြစ်ကတော့ အသီးအနှံများပေါ့။ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတယ်။ ကယ်လိုရီလည်း နည်းတယ်။ ဗိုက်လည်း ၀စေပါတယ်။ ၅. ကြည်ဥနှင့် ကြက်အူချောင်းများ
အခွံမာသီးများ စားထားတဲ့လူတစ်ယောက်က အစာစား တဲ့ပမာဏလျော့ကျသွားတာကို လေ့လာမှု များအရ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ၇. ပန်းသီး
သင့်ဈေးဝယ်ခြင်း ထဲမှာ အဆီမပါသောအသားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ အနှံပင်များ ပါဝင်ပါစေ။ Presented By
← စစ်တွေ သဲချောင်း ဆိပ်ကမ်း အနီးမှာ ဒုက္ခသည် စက်လှေ တိမ်းမှောက်	A Rohingya ferry boat sank in Pauktaw Myanmar, ​ပေါက်​​တော ဆင်​တက်​​မော်​၌ သေ​င်္ဘာေ​ရမြှုပ်​မှု သတင်း →